Posted by Star Tek 11 comments
မိမိ websiteအား browserနဲ့ မဖွင့်ပဲ andorid apkလုပ်မယ်
Android App Project အသစ် create လုပ်လိုက်ပါ။ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်မှန်း မသိရင် ဒီ link မှာ ကြည့်ပါ။
AndroidManifest.xml ဖွင့်ပြီး အောက်က code ကူးထည့်လိ်ုက်ပါ။ အောက်က codeက မိမိ appမှာ internet သုံးခွင့်ပြုဖို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတဲ့ code ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Star Tek5comments
Hobbit 2: The desolation of Smaug ကြည့်ပြီးနောက်
Hobbit2ကို ကောင်းတယ်ပြောလို့ သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ Hobbit 1ကို အိမ်မှာ တခါကြည့်ဖူးပြီး ဇာတ်လမ်းက မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီ။ ထွက်ထွက်ချင်းကြည့်မတော့ ခိုးကူးနဲ့ညားပြီး မှုန်ဝါးဝါး၊ အသံက မပီမသ၊ စာတန်းထိုးက မမှန်နဲ့ နားမလည်လိုက်ဘူး။ နောက်လည်း အကြည်ထွက်တော့ ဝယ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကြာပြီဆိုမှ ခု နံပါတ်တူးထွက်တော့ လူပြောသူပြောများတာနဲ့ Diamondမှာ 3D သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းအဖွင့်ကို Gandalf နဲ့ လူပုခေါင်းဆောင် Thorin Oakensheild တို့ ခရီးအတွက်တိုင်ပင်တာကို နောက်ကြောင်းပြတာနဲ့ စဖွင့်တယ်။ ပြီးတော့ sceneကို လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်တဲ့ နောက်က Orcsတွေလိုက်လို့ ထွက်ပြေးတာကို ပြတယ်။ Orcsတွေရန်က လွတ်အောင်ပြေးရင်း Beorn (Skin Changer)နဲ့ တွေ့ပြီး Mirkwoodကို ဖြတ်ဖို့ မြင်းပုလေးတွေ အကူအညီရတယ်။ Mirkwoodမှာ Spidersတွေ တိုက်ခိုက်တာပြတယ်။ 3Dဖြစ်ပြီး ကြည့်နေတဲ့အတန်းက screenနဲ့ နည်းနည်းနီးတဲ့အတွက် Spider ဘွားကနဲ Bilboနောက်က ပေါ်လာတဲ့အခန်းမှာ လူက လန့်ပြီး ခုံပေါ်က လျောကျတယ်။ Spiderရန်က လွတ်သွားပေမဲ့ Wood Elfsတွေရဲ့ အဖမ်းခံရတယ်။ Wood Elf ဘုရင် Thranduilက အထင်လွဲပြီး ဖမ်းထားတယ်။ (Elfs များနှင့် Dwarvesတွေကြားမှာ Dwarvesတို့ရဲ့ တိုင်းပြည် Moria ပျက်စီးမှုကြောင့် မျိုးနွယ်ချင်း မတည့်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ရွှေတွေလိုချင်တာလည်း တပိုင်းပေါ့လေ။) နောက် Bilboရဲ့ အကူအညီနဲ့ လွတ်မြောက်သွားပြီး Lake Townရောက်သွားတာ ပြတယ်။ Lake Town မှာ Thorin Oakenshieldကို တွေ့တဲ့အခါ လူတို့က တချိန်က နိမိတ်ဖတ်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ နိမိတ်အရ Thror, King Under the Mountain ရဲ့ မျိုးဆက်ပြန်လာတဲ့အခါ မြစ်တစ်ခုလုံး ရွှေတွေ ချောင်းစီးနေမယ်ဆိုတော့ ပျော်ကြတာပေါ့။ လူတွေ အကူအညီပေးတဲ့အတွက် နဂါးရှိရာ တောင်အောက်က လိုဏ်ဂူဆီရောက်၊ နဂါးကြီးက သူတို့လာတာသိပြီး ဖိုက်တင်း ပလေးပြီး နောက် Lake Townက လူတွေ ဒီလူပုတွေကို ကူညီရမလားဆိုပြီး ဖျက်ဆီးဖို့ထွက်သွား၊ ဇာတ်လမ်းလည်း တပိုင်းတစနဲ့ ရပ်သွားရော။ အဲမှာ ကျွန်တော်က ဘာဆက် ဖြစ်မလဲ သိချင်တာပေါ့နော။ ဒါနဲ့ စာအုပ် ဖတ်ဖြစ်သွားတယ် ဆိုပါစို့။
Posted by Star Tek0comments
Flat UI for mobile and web developer
ဒီတခါတော့ ကျွန်တော်က linkလေးတစ်ခု ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း design trendတွေမှာ Flat UIတွေ ခေတ်စားလာတာတွေ့ရတယ်။ ကိုယ် မဆွဲတတ်လို့ စိတ်ပျက်စရာမလိုပါဘူး။ အလကားပေးတဲ့ designတွေ အများကြီးရှိပြီး ကိုယ့် app သို့ website မှာထည့်သုံးလို့ ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ခုရေးနေတဲ့ application မှာ Flat UI သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် ရှာဖွေတွေ့သမျှကို မိတ်ဆွေတို့ကို ပြန်မျှလိုက်ပါတယ်။ အောက်က linkမှာ နမူနာ PSD်ငfile တွေ ကြည့်ပြီး download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
Flat UI နမူနာများ
Posted by Star Tek2comments
Web UI tool for Mobile Apps
Today when learning to develop Android Apps with PhoneGap, I wantavery nice static web page design. But clearly web design is not my thing. So I foundavery nice framework for developing mobile Web UI. That is JQuery Mobile.
They described JQuery Mbile as "A unified, HTML5-based user interface system for all popular mobile device platforms, built on the rock-solid jQuery and jQuery UI foundation. Its lightweight code is built with progressive enhancement, and hasaflexible, easily themeable design."
So, just open the version and save in your computer. Then, you can use these in HTML web page. You can learn from demos from JQuery Mobile Site.
Posted by Star Tek3comments
Internetအသုံးပြုခဲ့မှုအား မှတ်တမ်းတင်ပေးပြီး ပိုက်ဆံပါတွက်ပေးမည့် Internet Watch Pro
Internetအသုံးပြုခဲ့မှုအား မှတ်တမ်းတင်ပေးမည့် Internet Watchအား official versionအား ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီversionမှာ အသုံးပြုခဲ့သည့် နေ့စွဲ၊ စတင်သုံးစွဲချိန်၊ အချိန်မည်မျှ သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ထားသလို တစ်နေ့စာ သုံးခဲ့တဲ့ကြာချိန်နှင့် စုစုပေါင်း ကြာချိန်တို့ကို ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင် ပိုက်ဆံပါ တွက်ပေးမှာပါ။ Android version 2.2 အထက် သုံးလို့ရပါတယ်။
Posted by Star Tek4comments